संयमता अपनाऔं – Dainik Lumbini
बाँकेमा लगातार कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि त्रास बढेको छ । एकातिर परीक्षण सुस्त छ, अर्काेतिर परीक्षण भएका व्यक्तिको रिपोर्ट पोजेटिभ आइरहेको छ । नेपालमा लामो समयसम्म प्रदेश नं. ५ सुरक्षित रहन गएको थियो । तर पछिल्लो समय बाँकेको नेपालगञ्ज कोरोनाको ‘इपिसेन्टर’ जस्तै बन्न पुगेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको संख्या ८२ पुगेको छ । जसमध्ये नेपालगञ्जमा मात्रै २४ जना संक्रमित व्यक्ति फेला परेका छन् । मंगलबार मात्रै सात जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
मुलुक लकडाउन भएको आज बुधबार ४४ दिन भएको छ । अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट १३ हजार ६ सय ४७ परीक्षण गरिएको छ भने ५० हजार ८ सय ४५ आरडीटी परीक्षण गरिएको छ । जुन परीक्षण दर न्यून हो । परीक्षणलाई व्यापक बनाएर मात्रै कोरोनाको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ ।
यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रदेश नं. ५ र त्यसमा पनि नेपालगञ्ज अत्यधिक जोखिममा देखिन्छ । सोही कारण स्थानीय प्रशासनले मंगलबारदेखि तीन दिनका लागि नेपालगञ्जलाई पूर्ण रुपमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । नेपालगञ्ज त्यही ठाउँ हो जहाँ शुक्रबार, आइतबार र मंगलबार गरी २३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यस्तो उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा स्थानीय व्यापारीले पसल खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार प्रहरीसँग झडप गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको संवेदनशीलतालाई नबुझेर नागरिकको जीवन रक्षा गर्न खटिएका प्रहरीमाथि जाइलाग्ने जुन घटना भयो, त्यो खेदजनक छ । यतिबेला सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन सहयोग गर्ने बेला हो । सुरक्षाकर्मीलाई सघाउने बेला हो । लकडाउनको पूर्ण पालना नहुँदा नै निषेधाज्ञा लगाउनु परेको कुरालाई स्थानीयले बुझ्न जरुरी छ ।
अब नेपालगञ्जको कुरा मात्र रहेन, सबै क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण काबु बाहिर जान नदिन उच्च सर्तकता र लकडाउनको पूर्ण पालना जरुरी छ । यही बेला परीक्षण गति सुस्त छ । भैरहवामा रहेको कोरोना परीक्षण गति सुस्त छ । भैरहवामा रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा किट अभाव भएर स्वाब संकलन गरी काठमाडौं पठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । जति तीव्र गतिमा परीक्षण गरिनुपर्ने हो, सो अनुपातमा नहुँदा चिन्ता र त्रास थपिएको छ ।
वास्तवमा लकडाउन लम्ब्याएर मात्रै कोरोना संक्रमणमा कमी हुने छैन । कोरोना संक्रमणमा कमी ल्याउने भरपर्दाे कुरा चाहिं तीव्र परीक्षण नै हो । लकडाउन र परीक्षण एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । तर अहिलेसम्म परीक्षण दर हेर्दा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट नेपाल मुक्त छैन । अहिलेसम्म जे जति संक्रमित व्यक्ति भेटिएका छन्, त्यसको आधारमा परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने अवस्था छैन । तसर्र्थ तिनै तहका सरकारको सहकार्य र समन्वयमा धेरैभन्दा धेरै किटको व्यवस्था गरेर तीव्र परीक्षण गर्न जरुरी छ । र नागरिकको तहबाट परीक्षण गर्नबाट भाग्ने होइन, स्वतस्फूर्त परीक्षण गर्न गएर सरकारलाई सघाउनु पर्दछ । कोरोनाविरुद्धको युद्ध जित्ने अस्त्र भनेको स्वअनुशासन हो । सरकारले जारी गरेका निर्देशन पालना गरेर हो । कसैगरी पनि हामीलाई कोरोनासँगको युद्ध हार्ने छुट छैन । युद्ध जितिन्छ, तर संयमता सबैले अपनाऔं ।
मास्क प्रयोगमा कडाई र नागरिकको दायित्व